प्रेमिका भेटन बाघले गरे दुई हजार किलोमिटर यात्रा « Janata Samachar
प्रेमिका भेटन बाघले गरे दुई हजार किलोमिटर यात्रा
प्रकाशित मिति :7March, 2020 8:44 pm
काठमाडौं । मानिस र जनावरमा प्रेमको प्यास उस्तै हुन्छ । यस्तै घटना छिमेकी देश भारतमा पनि भएको छ । प्रेमिका खोज्दै एक बाघले २ हजार किलोमिटरसम्मको यात्रा तय गरेको छ । बाघको यो साच्चिकैको कथा अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । यो बाघ भारतको तेलंगनाको आदिलावादमा रहेको टिपेश्वर वनमा रहन्थ्यो । यहाँबाट प्रेमिकाको खोजीमा महाराष्ट्र राज्यको बुलढाणामा रहेको ज्ञानगंगा जंगलमा पुगेको छ ।
ज्ञानगंगा जंगल मेलघाट टाइगर रिजर्बको एक भाग हो । भारतीय वन विभागका अधिकारी प्रवीन कासवानले ट्वीटरबाट बाघको यात्राको रोचक जानकारी पोष्ट गरेका छन् । बाघले नहर, खेत, जंगल, सडकको पार गर्दै आफ्नो साथीको खोजीमा दिनरात हिँडेर २ हजार किलोमिटरको यात्रा गरेको कासवानले ट्वीटरमा लेखेका छन् । स्याटेलाइट रेडियोकलरलाई हेर्दा यो बाघले २ हजार किलोमिटर यात्रा गरेको छ ।
दिनमा जंगलमा लुकेर आराम गर्ने, रातमा शिकार र यात्रा दुवै गरेको वन विभागका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । यसको घाटीमा रेडियो कलर लागेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा अहिले बाघको विषय भाइरल बनेको छ । एकजनाले लेखेका छन्, कति भाग्यमानी बघिनी होली, २ हजार किलोमिटरबाट आफ्नो जीवनसाथी आएको छ । मानिसले पनि आजभोली यस्तै दुख गर्दैनन् ।
सामाजिक सञ्जालमा अर्का एकले लेखेका छन्, यो बाघ खासमा हिरो हो । आफ्नो प्रेमिकालाई खोज्नका लागि ठूलो त्याग गरेको छ । साच्चि यसले प्रेमिकासँग के के गर्यो ? कि प्रेमिका रिसाइन ? वन विशेषज्ञले खोज्न मिल्दैन ? प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
घरपालुवा जनावरलाई अनावश्यक नछुन पशुविज्ञहरूको सुझाव
काठमाडौं । मानिसबाट केही पशुमा पनि कोरोनाभाइरस सरेको केही प्रमाण भेटिएपछि वैज्ञानिकहरूले तिनलाई पाल्ने व्यक्तिलाई
११ साताको लकडाउनपछि वुहानबाट निस्कियो रेल
काठमाडौं । ११ हप्ताको लकडाउनपछि कोरोनाभाइरसको उद्गम स्थल चीनको वुहानबाट बुधबार पहिलो रेल निस्किएको छ
१ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको वुहानमा एक सातामा कोरोना संक्रमित काेही पनि नभेटिएको जनाइएको छ
पछिल्लो अपडेट अनुसार भारतमा ५ सय ३३ जनामा संक्रमण भएको छ ।